ဟေ့အဲဒီမှာမှမဟာဗျူဟာညမ်း။ ထိုနာမည်မှာအဖြစ်စေခြင်းငှါဆိုကြသည်၊ကျွန်တော်တို့ဟာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သွားရတဲ့ဂိမ္းစွဲသူအမြင်ကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်အတွက်စျေးကွက်။ မကြာမီပြီးနောက်ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်များ၊ကျနော်တို့ကြီးပြင်းကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချကျနော်တို့အတူတကွသွင်းထားကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းညစ်ညမ်းဂိမ္းခရီးကပတ်ပတ်လည်အခြေမဟာဗျူဟာခေါင်းစဉ်ကတကယ်တော့သင့်ရဲ့အရည်အချင်းကိုစမ်းသပ်။ ခဏတစ်အရေဂိမ်းကစားချင်တယ်အရာတစ်ခုခုရဲ့ရိုးရှင်းလွယ်ကူနှင့်အထက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်၊ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်စျေးကွက်မျက်နှာသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အနေနဲ့ပရိသတ်ကိုရှိကြောင်းစစ်မှန်သောအကျိုးစီးပွားအတွက်အရာတစ်ခုခုကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးခက်ခဲ။, ဒါကြောင့်၊ထိုအတူ၊ကျနော်တို့တည်ဆောက်မဟာဗျူဟာညမ်းဂိမ်းများနှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်သင်ဖို့အတွက်လာနှင့်ပျော်မွေ့သို့မဟုတ်ယုံဂိမ်းစုဆောင်းမှု! ပါကကျေးဇူးပြုပြီးတက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးသို့သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့၊ပေါင်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်စောင့်ရှောက်ရန်လမ်းကိုအစဉ်အမြဲ။ မော်ဒယ်ခွင့်ပြုရန်အထောက်အကူအတွက်သေးငယ်တဲ့နည်းလမ်းကြေးဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်အရေခွံ၊ထောက်ခံကဒ်၊ဒါကြောင့်အပေါ်–လုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေလုပ်မည်မဟုတ်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံမဆိုလျော့နည်းခက်ခဲ! ဒီမကအနိုင်ရမှပေးဆောင်ခရီး:အနေဖြင့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသွားဖို့ထွက်လာအောင်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်လုပ်နေတာအမင်းအလုပ်!, ဒါကြောင့်၊ရဲ့ပြောဆိုကြကုန်အံ့အနည်းငယ်အဘယ်အရာကိုမျှလောက်ကြီးစွာသောနှင့်ပတ်သက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဆုံးအားဖြင့်၊ငါမျှော်လင့်တယ်လိမ့်မယ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့သင်တက်လက်မှတ်ထိုး။
ဒီနေရာမှာမဟာဗျူဟာညမ်းဂိမ်းများ၊ငါတို့သည်ကိုပူဇော်ဖို့လူအဖို့လက်လှမ်းတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်–ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျယ်ကျွန်တော်တို့လွှင့်ပစ်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားတင်၊ပိုကောင်း! အဖြစ်အမှုအရာအဆင္ေရပ်၊၂၃ ဂိမ်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်သာစာကြည့်တိုက်၊ဒါပေမယ့်ဒီမကြာချဲ့ထွင်အဖြစ်ထုတ်ဝေ ၁ ဂိမ်းအသစ်အတိုင်း ၂ လများ။ ထို့အပြင်၊မဟာဗျူဟာညမ်းသွားထည့်ဖို့အစည်းများ၏အသစ်အင်္ဂါနှင့်ကိရိယာအသံုးျပဳနှင့်ပင်ပျော်စရာအဘို့အများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာစောင့်သိပရိသတ်များ–ပိုပြီးအဲဒီအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အကြာတွင်!, အခုတော့၊ဤ ၂၃ ဂိမ်းများမဟုတ်အားလုံးတနှင့်အလားတူ:ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ ၃ ဖွံ့ဖြိုးရေးလက်နက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအနုပညာရှင်များ၊ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဒါကြောင့်အပေါ်ကြောင်းဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့တစ်ခုအကွာအဝေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်အမြန်မျက်နှာသို့သင့်ရဲ့အရသာ။ ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပျော်မွေ့တာပေါ့ရှိသမျှဂိမ်း၊အရာအတိအကျအဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ချဲ့ထွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အချိန်ဇယားနှင့်အပေးအထူခင်းကျင်းစီမံနိုင်အောင်သင်လိုချင်ခူး။ ဘာပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထက်အများကြီးၡမ်ားဟာဗျူဟာအားကစားပြိုင်ပွဲသငျသညျကနေရှေးခယျြနိုငျကွောငျး?, ဒါဟာတောက်ပသောစနစ်နှင့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း၏အတိုင်းအနုပညာလက်ရာများနှင့်ဖော်ကျနော်တို့အောင်မြင်သွားပါပြီ–အမှန်တကယ်မှော်ပရိကံ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့၏အမြင်ရည်မှန်းချက်အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်ဌာနဖြစ်နိုင်ရေးအပါဆုံးအရာ။ ဒါကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူလာသည်။အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှင့်အမြင်အာရုံဗေ။ ပတ်လည် ၆၀%ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်အမှန်တကယ်ဝင်မျက်နှာသို့အနုပညာရှင်များနှင့် ၃D ဖော်ရန်အသင်းမှအရအဆိုပါဂိမ်းရှာသကဲ့သို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ သင်လိုချင်တာကဲ့သို့ခံစားရရန်သင်အမှန်တကယ်သံုးေတွက်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးင့္ကားေမာ္ဒယ္၊ပိုကောင်း။, ပါကအားလုံးနီးပါးကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်အညီညွှတ်ရေးအင်ဂျင်၊ဒါကြောင့်မည်သည့်အသိပညာရှိပါကအကြောင်း၊သင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုဖန်တီးဂိမ်းများမယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေပြေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့–အထူးသဖြင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အအောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်ကြည့်ရှု။ တူရှိခြင်းကအလွန်ကြီးစွာသောအမှုတို့ကို-ဂိမ်းစွယ်စုံကျမ်း၊ကျွန်မတို့ဟာလေတြလိမ့်မည်ဟုကစားတစ်လျှောက်လုံးဂိမ်းအဖြစ်အထိအရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်များ။ ဤ ၁၀၀%အဖို့သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်နှင့်သင်တွေ့မည်မဟုတ်ထိုသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း။ သူတို့ကလည်းအားလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြွန်၊ဒါပေမယ့်သတိပေးခဲ့သည်ခံရ:စေခြင်းငှါလုဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုအနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ဖို့သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်!, ရှိပါတယ်လက်ရှိ ၉၇ ဗီဒီယိုများရှိပြီးသူတို့ပေါင်းလိုက်ရင် ၃ နာရီစနစ္ပါ–တော်တော်အေးမြ၊အယ်?
သဘာဝကြောင့်ကျနော်တို့ဆင်းမှာတဦးတည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်လမ်းကြောင်း၏ဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးအစား၊ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ကျနော်တို့လက်သည်းအဆိုပါဂိမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြန့်ချိမယ်လို့အကောင်းဖြစ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်လက်ျာအတွက်–အပြာ။ အဘယ်ကြောင့်တစ်လျှောက်လုံး beta ကိုစမ်းသပ်ကိုပေးပြီးကစားရန်လူမျိုး၊ကျွန်တော်တို့မပါဝင်ခဲ့ပါ၏မည်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီး! တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ကိုယ့်ဂိမ်းကစားခြင်းရှုထောင့်စိတ်ကူး:ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသိစေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်စွာနှင့်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းရှေ့ဆက်ရွေ့လျား၊မဟာဗျူဟာညမ်းသွားဖို့သာကောင်းပြီးဒီဇိုင်း။, ပါကအားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိပါကတစ်ဦးတယောက်လက်ရွေးသင်ဖွင့်နိုင်သည်အတွက်မီနူး။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်လျှင်သင်သာခံစားရတူကစားအတူ၊သင်လုပ်နိုင်သည်! ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်စေခြင်းငှါအနည်းငယ်အင်္ဂါနှင့်ဖန်တီးဖို့အနည်းငယ်ခက်ခဲအခြေအနေ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲခင်အပြောင်းအတော်လေးကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်–အခမဲ့ခံစားရရှုပ်များချွတ်နေစဉ်သင်ရေကြောင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်ဘူး။ စေရဲ့ဖြစ်အိမ်၊အကြီးတစ်ခုလုံးကို၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်လက်ည့္ခဖို့စတင်နှင့်အတူ၊လက်ျာ?
သင်ရှာလိုလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဝဲ၌တစ်ချိန်ချိန်တွင်မဆိုဂိမ်း–မစိုးရိမ်ကြ။ မြင်တဲ့အတိုင်း၊အသိုင်းဒီနေရာမှာလုံးဝအယုံနဲ့သူတို့တွေဟာအမြဲလိုလိုထွက်ကိုကူညီအခါတိုင်း၊နှင့်သို့သော်၊ဒါကြောင့်လိုအပ်သည်။ အဘယျသို့ကဒီကိုဆိုလိုသည်သင်အဘို့အကြောင်းသင်သွားပြီသမျှသောစကားတို့ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုတိုးတက်တဆင့်ခေါင်းစဉ်၊ဤမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်သင်အဆက်အသွယ်ရအခြားသူများနှင့်အတူကနေတဆင့်တရားဝင်ဖိုရမ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အဖက်ဆာ။, ငါတို့သည်လည်းအများအသိုင်းအဝီကီရဲ့ခံကြောင်းသင်အသုံးဝင်သောရှာတွေ့စေခြင်းငှါ၊ပေမယ့်ဒါဟာလိုအပ်ချက်များကိုအတော်လေးအနည်းငယ်ပိုပြီးအရေးဆွဲထားပြီးစာမျက်နှာခင်ဖြစ်လာသည့်အရင်းအမြစ်(မစိုးရိမ်ပါနဲ့:ကျနော်တို့စီစဉ်ထားကူညီကြောင်းအရာနှင့်အတူကဒီမှာကျော်ကိုလာမယ့် ၆ လ)။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဆာဗာလည်းနေရာတစ်ခုမျှဝေဖို့အညမ်း၊လိင်ပုံပြင်များနှင့်အမျိုးအစား၏အရာ–တစ်ဦးတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ရပ်ကျော်နှင့်အတူ ၆၊၅၀၀ ဖွဲ့ဝင်များ–ချိုမြိန်!